Ogaden News Agency (ONA) – San Diego Union Tribune oo ka hadlay munaasabadda ka qay-qaadashada OYSU munaasabadda “Walk to end genocide”
San Diego Union Tribune oo ka hadlay munaasabadda ka qay-qaadashada OYSU munaasabadda “Walk to end genocide”
San Diego: (04-05-2013) Waxaa maalinta axadda ee taariikhdu tahay bisha April 7, 2013 haddii alle idmo lagu qabanayaa magalaada San Diego ee gobolka California munaasabadda “Walk to end genocide”. Munaasabaddan ayaa ah mid sannadle ah isla markaana labilaabay sannadkii hore. Iyadda oo ujeedadu tahay in lagu soo bandhigo loogagana hadlo sidii looga hortagi lahaa tacadiyada iyo xasuuqa bini’aadan ee ka dhaca aduunka sida Ogadenia.
Waxaa qayb libaax ka qaadan doona munaasabaddan Ururka Midowga Dhalinyarada iyo Ardeyda Ogadenia faraciisa San Diego, oo la filayo iney soo xaadirin doonaan ilaa 100 qof.
Wargeyska San Diego Union Tribune oo ah midka ugu weyn magaalada San Diego ayaa waxaa uu qoraal kasoo diyaariyey munaasabadan, isaga oo xusay ururka OYSU San Diego. Wuxuu wargeysku intaa raaciyey in ururka OYSU San Diego hadafkoodu yahay sidii ay aduun weynaha ugu soo bandhigi lahaayeen tacdiyada iyo xasuuqa bini’aadan ee ay dawladda Ethiopia ku heyso shacabka Ogadenia.
Ururka OYSU San Diego iyo jaaliyadda Soomaalida Ogadenia waxay ka codsanayaan dhamaan dad weynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada San Diego iyo nawaaxigeeda ineysan moogaanin munaasabaddan haddi alle idmo.
Ciddii ubaahan in laqaado fadlan la xiriir ururka OYSU iyo Jaaliyadda si aad u’ogaato goorta iyo goobta lagabaxayo.
Munaasabaddu waxay ka dhici doontaa :
Ocean Air Community Park (Carmel Valley)
Registration & Check-in open 9:00 am
Walk begins 9:45 am